Hevitra mandalo ; Resaky ny mpitsimpona akotry : tsipi-teny ho an’ny fitondrana, hafatra ho an’ny fitsarana | NewsMada
Hevitra mandalo ; Resaky ny mpitsimpona akotry : tsipi-teny ho an’ny fitondrana, hafatra ho an’ny fitsarana
Samy mahafantatra ny ankamaroan’ny mponina fa fandikan-dalàna ny fanaovana fitsaram-bahoaka sy ny fampiharana ny didy tapahan’izany fitsarana an-tsisin-dàlana mandeha ila tsy ahitan’izay voampanga fahafahana hiaro tena izany. Araky ny vokatry ny fanadihadiana natao momba ny fitsaram-bahoaka anefa eo amin’ny antsasan’ny mponina eo ho eo dia mankato ny fanaovana an’izany. Ary arakaraky ny fahalavitan’ny tanan-dehibe no mampitombo ny taha fankatoavana ny fironana amin’ny fitsarana tsy misy andraso-andraso. Manambara izany ny filan’ny vahoaka fitsarana famaizana ny mpanao ratsy ka rehefa tsy vitan’ny tompon’andraikitra dia avy izy amin’ny angady sy ny harona.
Ireo vokatry ny fanadihadiana ireo dia tsy mifanipaka amin’ny filaharan’ny mponina malagasy anisan’ny loha-laharana amin’ny tsy fanaovana sotasota sy ny tsy fitiavana herisetra araky ny fandiniky ny mpanara-maso sasantsasany. Vao mainka aza manamafy ny firaiketam-pon’ny mponina amin’ny fisian’ny fandriampahalemana. Rehefa manjakazaka ny mpanao ratsy ka tazana sy tsapan’ny vahoaka ny tsy fanefan’ny fanjakana sy fitsarana ny andraikiny eo amin’ny fiarovana azy. Mihevitra ara-dariny izy fa tsy mifehy intsony arak’izay tokony ho izy ny lalàna. Noho izany, dia mbola ho adidiny ihany ve ny fanajana lalàna ka tsy manana zo afa-tsy ny fiandrasany ho mangana irery am-pitoerana ? Tsongoy fon-tena, tsongoy fon’olona. Eo amin’ny tany toa tsy misy fanjakana hiaro ny olona sy fananany intsony ny hany vahaolana dia ny fanavotan-tena ka samy mandeha, samy miaro tena. Sady tsipi-teny ho an’ny mpitondra tsy mahafehy ny fandriampahalemana no hafatra ho an’ny fitsarana tsy mahefa ny fiarovana amin’ny fialofana ao ambanin’ny eloben’ny lalàna izany.
Tsy atao resaka intsony moa ny momba ny fitondrana izay mitombo hatrany ny tsy fanatanterahany ny anjara adidy ankinina aminy. Tsy ampy anefa ny fahitana an’izany anafahana ny fitsarana mikasika ny fiarahany mirona any an-kady, nahaverezany ny toky izay tokony niankinan’ny vahoaka. Any amin’ny Faritr’i Melaky no anisan’ny faritra tena mafana vay ny fankatoavan’ny mponina an’ity fitsaram-bahoaka ity. Araky ny fahatsiarovana dia any ihany koa no tena manan-kery sy mitondra vokatra ny dina. Inona moa no ifandraisan’izany afa-tsy ny tsy fandairan’ny lalàna intsony ary ny tsy maha làlana intsony ny fitadiavana rariny any amin’ny Làpan’ny Fitsarana. Very hasina ny Repoblika.
Misy fanantenana mitsilopilopy izao raha mahita ny vondron’ny mpitsara sasantsany manao hetsika mahery vaika mitory ny fikasany momba ny fanarenana an’izany. Mety tsy hahomby firy anefa izany tolona izany raha toa hanomboka amin’ny fanadiovana ny tontolo aty ivelany izy ka tsy hanetry tena handray kifafa mba hamafa ny ao anatiny fa dia ho vitan’ny fanaovana kiantrano an-trano fotsiny. Diovy ny ankohonanao tahaky ny fitiavanao andiovana ny aty ivelany.